လေးဘီးလျှပ်စစ်ကား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း - သတင်း - Shandong JINMA Technology Co. , Ltd ။
၏ 1.The စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ထိရောက်မှုလေးဘီးလျှပ်စစ်ကား သာမန်လောင်စာဆီယာဉ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ လျှပ်စစ်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သော်လည်းနျူကလီးယားစွမ်းအင်၊ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုခြင်းနည်းပညာတို့၏အသုံးချမှုသည်နောက်ထပ်တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂။ လေးဘီးလျှပ်စစ်ကားသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေပြီးမော်တော်ယာဉ်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူခြင်းသည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုရရှိစေသည်။ ၎င်းသည်လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုတိုးတက်စေသည့်အပြင်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အသုံးချရန်အုတ်မြစ်ချသည်။ အနာဂတ်မှာ။
3.The structure of theလေးဘီးလျှပ်စစ်ကား is simple, and the simplified structure will bring about cost reduction, convenient operation and larger interior and exterior beautification space. The electrification of automobiles has greatly reduced parts and components, which means that mass production can be carried out faster and more efficiently with less manpower, space, equipment, and management, and cost savings.
လွန်ခဲ့သော:Lithium Iron Phosphate Battery ၏အားသာချက်များ
နောက်တစ်ခု:လောင်စာဆီသုံးစီးဘီးစီးတီးလျှပ်စစ်ကား J2 ၏အားသာချက်များ